Ukubuyekeza: "Insularity, uhambo lwangaphakathi lomgijimi", nguRalph del Valle | Izincwadi Zamanje
Isikhathini esedlule Ngikutshele mayelana Insularity, uhambo lwangaphakathi lomgijimi, of URalph del valle, owamanqamu we Umklomelo Wezincwadi Ezingalingani 2014. Umshicileli ubenomusa ngokwanele ukuba angithumelele ikhophi yencwadi, engaphezulu kokufeza engikulindele kuyo. Cishe izinyanga ezintathu zidlulile lokho. Kepha ungacabangi ukuthi kwangithatha cishe izinyanga ezintathu ukuyifunda: Ngisifundile ngasiphinda ngasifunda sonke leso sikhathi kaningana. Futhi ngizokwenza futhi. Imicabango, izimo, ukucabangisisa, indaba uqobo lwayo ingihlabe umxhwele kangangokuba kaningi ngizwa kunesidingo sokuphinda ngifunde izigaba izikhathi eziningana, futhi ngihlale nemisho "yokukhotha" ekhanda lami njengaleyo ephendula uswidi umlomo.
Uma ugijima, uma wake wagijima, uma uzwa isidingo sokuqalisa ukugijima, uma udinga ukuqonda ukuthi kungani abantu begijimela ukushwabadela umgwaqo ngezicathulo zabo (noma ngebhayisikili labo, nezigxobo zabo, kwenza mehluko muni) noma umane ufuna ukwazi ukuthi kungani abantu begijima, lapho-ke kufanele ufunde le ncwadi. Mhlawumbe isitatimende lapho le ndaba iqala khona, "Indoda egijimayo indoda egijimayo" kubukeka kunedlanzana kakhulu kuwe. Kepha uzoqonda izinto eziningi uma ufunda le ncwadi, hhayi nje ngokugijima. Ngoba Ukungaboni Kuyinto a uhambo lwangaphakathi lokho kuhlola izinto eziningi, nokuthi, noma ngabe uyagijima noma cha, ngokuqinisekile uzizwa uhlanganiswa nezinye zazo, ngezinga elikhulu noma elincane.
Ukungaboni Yincwadi exakile. Futhi lokho, ezincwadini, ukuncoma, okungenani kulapho inhloso yami ikhona. Yindaba yensizwa ebamba ukucabanga kwayo ngenkathi isitshela kancane kancane indaba, njengabafundi, okufanele siyakhe kabusha. Kepha le ndaba ilula. I-protagonist yethu yindoda ehlukanisiwe, ngemuva kokwehluleka kothando, ukwehluleka engakwazanga ukukunqoba, isondela eBerlin, okungenani lokho okulindelekile, ngoba ayisho ngempela ukuthi ikuphi. Ngempela, konke kusongwe ngohlobo lwe-aura yemfihlakalo. Asilazi igama lakhe, futhi usebenzisa ama-initials kuphela ukusho abanye abantu, ngaphandle kwalabo abangabalulekile futhi abalingiswa abalula abadlula ngandlela thile empilweni yakhe bangabe besabuya.
Indaba ibhalwe sengathi bekuyi- idayari. Ngalo mqondo, ayinaso isakhiwo esichazwe ngokucacile, kepha umlingiswa ophambili uyathuthuka, kwesinye isikhathi ebhala kaningi futhi ngezinye izikhathi, futhi angene ezingxenyeni zempilo yakhe ezisebenzela ukukhanyisa imicabango yakhe futhi azame ukuthola incazelo ngempilo yakhe, usevele wakuphila lokho akuphilayo.
I-protagonist iqala indaba yayo phakathi "Ubusika basePrussia", ngokushesha. Kepha, Ugijimelani? Lokhu kungenye yezinto ezingaziwa kakhulu ukuthi uzama ukuziqonda yena: izizathu ezimholela ekuziqeqesheni ngamandla akwenzayo, izizathu ezimcindezelayo, izizathu zokuthi kungani ekudinga, njengokuphefumula. Njengoba indaba iqhubeka, umlingiswa ophambili usivezela ukuthi, ngenxa yokwehluleka kwakhe ngokomzwelo futhi ngemuva nje kokufika lapho ayelibangise khona, unquma ukuziphonsela inselelo: ukugijima umncintiswano wehafu emjahweni esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha. Kepha i-protagonist yethu ayisiye nomsubathi.
Ngabe wake wazimisela ukufeza inselelo ebonakala ingenakwenzeka kuwe? Ngoba lokhu kungenye yezingqikithi ezinkulu le ncwadi ekhuluma ngazo: amandla wokwenza ngcono, umzamo kanye nesidingo sokuzibekela imigomo yokunqoba ukulinganiselwa komuntu.
"Impilo izokhokha ama-akhawunti asasele"
Kimi, lesi yisisho esifingqa kahle ingqikithi yale ndaba, okungenani engishaye kakhulu, futhi eqhubeka ikhala ekhanda lami, njengalezo zigatshana ezikhuthazayo ezithandwa yibo bonke abantu futhi ezingaba indlu yesibani phakathi kwamabili Nokuthi le ncwadi igcwele imisho nezicucu ezinhle.
Empeleni, incwadi yonke igxile kulo mbono. Ekugcineni, ngemuva kokuhudula umbono wokuqala (ukugijima ukubaleka), sifinyelele esinqumweni esigcwele ithemba. Ngoba, ekugcineni, singakwazi ukukhokhela lezo zikhokhelo ezingakafiki.
Ukungaboni. Uhambo ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukubuyekeza: "Ukungabi nalwazi, uhambo lwangaphakathi lomgijimi", nguRalph del Valle